बार्सिलोना ग्रेट एमोरको दावी, “मेसी विश्व कै उत्कृष्ट” – Khel Dainik
बार्सिलोना ग्रेट एमोरको दावी, “मेसी विश्व कै उत्कृष्ट”
एजेन्सी । स्पेनीस ला लिगातर्फ आइतबार लेभान्टे विरुद्ध ह्याट्रिकसहित दुई गोलको एसिस्ट मिलाएपछि बार्सिलोनाका डाइरेक्टर ग्वीलेर्मो एमोरले लियोनल मेसीलाई उत्कृष्ट फुटबलर बताएका छन् ।
आइतबार मेसीले लेभान्टेविरुद्ध उसकै घरमा तीन गोल गर्नुका साथै २ गोलका लागि अवसर मिलाइदिएपछि बार्सिलोनाले ५–० को शानदार जित हात पारेको थियो । साथै यो जितपछि बार्सिलोनाले ला लिगाको अंकतालिकामा ३ अंकको स्पष्ट अग्रता समेत बनाएको छ ।
No player in the history of the top-5 leagues has ever scored 20 goals and provided 20 assists in the same season.
This record is now within reach for Messi. He has 22 matches to get another 10 assists. pic.twitter.com/xczY8Aho1z
— totalBarça (@totalBarca) December 16, 2018
लेभान्टे विरुद्ध १७ मिनटमा ह्याट्रिक पूरा गरेका मेसीले यस सिजन १४ गोल गर्नुका साथै १० गोलको अवसर समेत मिलाइदिएका छन् । यो मेसीका लागि एक विशेष उपलब्धी समेत हो । यो उपलब्धीसँगै युरोपको शिर्ष पाँच लिगमा डबल यो फिगर बनाउने उनी पहिलो अर्जेन्टिनी फुटबलर बनेका छन् ।
साथै मेसीको त्यो ह्याट्रिकसँगै एकै बर्षमा क्लब र देशका लागि उनले ५० गोलको आँकडा समेत पूरा गरेका छन् । यो सफलता उनले पछिल्लो ९ बर्षमा आठौंपटक हासिल गरेका हुन् ।
उता बार्सिलोनाका लिजेण्ड एमोरले ३१ बर्षिय मेसीको यो प्रदर्शन र सफलता पछि उनको प्रशंसा गर्न कन्जुस्याई गरेनन् । फोर फोर टुका अनुसार मेसीबारे चर्चा गर्दै बार्सिलोना ग्रेट एमोर भन्छन्, “लियोले हार मानेनन् । उनी त्यस्तै खेल्छन्, किनकी उनी उत्कृष्ट छन् ।
उनी निकै व्यवसायीक छन् र गम्भिर पनि । मेसी कहिल्यै दोस्रो उत्कृष्ट खेलाडी हुन सक्दैनन् । उनले पछिल्ला खेलहरुमा पनि निकै सुधार गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनी खेलमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।”
स्मरणीय छ कि आइतबार खेलिएको त्यो खेल मेसीको ३२३ औं ला लिगा खेल समेत थियो । त्यो खेलपछि उनले आफ्नू पूर्व क्लब टिममेट जाभीलाई पछि पारेका छन् ।
← छोराले खेल जिते लगतै पिताको स्टेडियम मै निधन लिभरपुलका म्यानेजर क्लप भन्छन् “म्यानचेष्टर युनाइटेड विरुद्धको जित इङल्याण्डमा अहिलेसम्म कै उत्कृष्ट” →